Mogadishu Journal » Madaxweyne Xaaf oo ku dhawaaqaya Guddiga doorashooyinka iyo Farsamada Galmudug
Madaxweyne Xaaf oo ku dhawaaqaya Guddiga doorashooyinka iyo Farsamada Galmudug
Mjournal :-Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf ayaa lagu waddaa in uu ku dhawaaqo Guddiga soo xulista xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug iyo Farsamada maamulka Galmudug.
Xaaf ayaa saacaddihii ugu dambeeyay la tashiyo la yeeshay Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha dalka, waxaana ay isku raaceen in uu Magacaabo Guddi ka kooban 12 xubnood.
Ra’iiusul Wasaare Kheyre ayaa dhawaan sheegay in hanaanka Geedi socodka Galmudug uu la wareegay Madaxweyne Axmed Ducaalle Geelle.
Maamulka Galmudug ayaa wajahayay Khilaaf maalmihii ugu dambeeyay ka dib markii Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf uu si rasmi uga laabtay tilaabadii uu ugu wakiishay howlaha maamulka Galmudug Wasaaradda Arrimaha Soomaaliya.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf ayaa lagu waddaa in uu ku dhawaaqo Guddiga soo xulista xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug iyo Farsamada maamulka Galmudug.
Waqtiga uu furmayo Kal-fadhiga 6-aad ee Golaha Shacabka oo la shaaciyay
Dood ka dhalatay Wafdi ka socda Somaliland oo sheegay in ay ku wajahan yihiin Kismaayo